Maleeshiyada ISIS oo ka baxday Qandala saacado kadib markii ay qabsadeen magaalada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaleeshiyada ISIS oo ka baxday Qandala saacado kadib markii ay qabsadeen magaalada
Hoggaamiyaha Maleeshiyada ISIS ee Puntland, Cabduqaadir Muumin. [Sawirka: Jihadology.net]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa ka baxday magaalada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland kadib markii ay qabsadeen, sida ay cadeeyeen dadka deegaanka.
In ka badan 50 maleeshiyada ISIS ah ayaa qabsaday magaalo xeebeedka subaxnimadii hore ee maanta oo Arbaco ahayd iyagoo aan la kulmin wax iska-caabin ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Intii ay haysteen magaalada Qandala, boqolaal dadka deegaanka ah ayaa ka cararay magaalada baqdin ay ka qabaan maleeshiyada.
Ka bixitaanka maleeshiyada ISIS ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada Puntland qorshaynayeen in ay weerar ku qaadaan si ay dib ugu qabsadaan magaalada.
Waa markii kowaad oo ay ISIS qabsato magaalo kutaala Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya tan iyo markii ay ka furteen saldhigoodii ugu horeeyay ee Soomaaliya, kaasoo kuyalaa dowlada goboleedka Puntland ee waqooyiga-bari Soomaaliya.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa rajaynaya in uu isku-shaandayn ku sameeyo golihiisa wasiiradda inta lagu guda jiro maalmaha soo socda, sida ilo-wareedyo dowladda katirsan oo ku dhow madaxtooyada ay u sheegeen warsidaha [...]